I-Showpad: Umxholo wentengiso, uQeqesho, ukuzibandakanya kwabaThengi kunye neMilinganiselo | Martech Zone
Njengoko ishishini lakho likhupha amaqela athengisayo, uyakufumanisa ukuba ukukhangelwa komxholo osebenzayo kuya kuba yimfuneko yasebusuku. Amaqela ophuhliso lweshishini akhangela amaphepha amhlophe, izifundo zetyala, uxwebhu lwephakheji, imveliso kunye noshwankathelo lweenkonzo… kwaye zifuna ukuba zilungelelaniswe ngumzi mveliso, ukukhula kwabathengi, kunye nobungakanani babathengi.
Kukuthini ukuVumela ukuThengisa?
UkuXhotyiswa kweNtengiso yinkqubo yeqhinga lokuxhobisa imibutho yokuthengisa ngezixhobo ezifanelekileyo, umxholo kunye nolwazi lokuthengisa ngempumelelo. Ixhobisa abathengisi ukuba bathumele amava abandakanyekayo kubathengi banamhlanje abalindele ukwenziwa komntu, ukuzenzekelayo, kunye nokuyila ngokutsha.
UkuVumela ukuThengiswa okude
Ngotshintsho lwe-COVID-19 lwamva nje, amaqela okuthengisa alahlekelwe sisakhono sokunxibelelana ngokobuqu namathemba abo kwindawo okanye ngenkomfa. Ukuthengisa okukude kuye kwakhula ngenzala kunye nokwenza ukuba ukuthengisa okukude kube ngumceli mngeni. Inyaniso, ngaphezulu kwesiqingatha sayo yonke imibutho wathi ukuthengisa okukude kwakungumceli mngeni.
I-coronavirus yoyikeka kakhulu kwihlabathi, kodwa ilungile kwintengiso evumayo… Abantu abathengisayo onabo bayacelwa ukuba bathathe indawo engaphezulu- yenza okungakumbi ngokuncinci. Izixhobo zokuzibandakanya kwintengiso ziqhuba ngokukuko nangokufanelekileyo.
UMary Shea, uMhlalutyi weForrester
Qinisekisa ukujonga Indawo yokubonisa yokuThengisa ekude. I-Showpad yakha iHub ukunceda imibutho ekufuneka itshintshele kwimodeli ekude kakhulu. Ikhululekile ngokupheleleyo kwaye ibandakanya uthotho lwevidiyo Ukuphumelela ngoyilo, Iibhlog zokuthengisa, ukuqeqesha, ukukhwela ebhodini, kunye neengcebiso ezivela kwiingcali zePowerpad.
I-Showpad ineqonga lokunika amandla ukuthengisa elibandakanya yonke imiba yohambo lokuthengisa olufunekayo:
Umxholo wamathala eencwadi akhangeleka ngokulula
Umxholo womthengi obandakanyekayo kwaye ubuqu
Ulwazi lokuthengisa lokujonga umxholo wakho kunye nokusebenza kweqela
Ukudityaniswa kokuzenzekelayo iinkqubo zentengiso kunye nokutyhala idatha kwiCRM okanye iimodyuli zemvumelwano.
AmaQonga okuXhobisa ukuThengisa enza ukuba iinkampani zibandakanye ukufunda okuqhubekayo kunye nophuhliso lokuthengisa, zonyuse ukusebenza kwenkqubo yentengiso, zenze abathengisi baphuhlise ubudlelwane obungcono kunye nabathengi, kunye nokulungelelanisa intengiso kunye neenzame zentengiso.
Ulawulo lweMixholo yokubonisa
I-Showpad yenza ukuba imibutho inendawo enye esembindini evumela abathengisi ukuba bafumane, babonise kwaye babelane ngezinto zakutshanje, ezikwimpawu yentsingiselo kumava abonakalayo. Inkqubo yolawulo lomxholo we-Showpad yokulawula umxholo wakho ngokufanelekileyo, kwaye ngokukhawuleza wazise amaqela akho ngalo naluphi na uhlaziyo-okwenza ukuba umxholo olula ufumaneke lula kubantu abalungileyo ngexesha elifanelekileyo. I-Showpad inokudibanisa ne-CMS yakho esele ikhona okanye i-DAM yokungenisa okanye ukungqamanisa ilayibrari yakho yonke yefayile.
Ukuhambisa ukukhwela ebhodini, uqeqesho kunye nokuqeqesha abathengisi bakho kufuneka babe ngabacebisi abathembekileyo kwaye badlule kwinani lokuthengisa kunye nesoftware yoQeqeshiso lomqeqeshi. Ngomqeqeshi we Showpad, unga:
Qeqesha -Nikezela ukubandakanyeka ebhodini kunye noqeqesho ukunceda abameli bakho bokuthengisa baphumelele.
Vavanya -Kubekwe esweni ukugcinwa kweqela lakho ukuze kuchongwe kwaye kulungiswe iindawo ezibuthathaka.
Zenza -Yakha ukuzithemba ngokwenza okurekhodiweyo, umdlalo-ndima kunye nokuphononongwa koontanga
Coach - Phakamisa uhlalutyo olutyebileyo kunye nokurekhodwa ukuze abaphathi bakwazi ukuqeqesha ngokufanelekileyo
Intsha enomdla yokubonisa umqeqeshi Umphathi Hub ilungelelanisa ukuqeqeshwa koqeqesho kunye noqeqesho kwicandelo nangaphakathi kwintengiso, ngelixa ishiya ixesha lokuba abaphathi benze imisebenzi yabo yosuku.
Ukuphucula ukuthengisa kunye nokusebenza ngokuthengisa kunye ne-injini yengcebiso ngokuqonda indlela abathengisi kunye nethemba elinxibelelana ngayo nomxholo kunye noqeqesho lwakho. Iimpawu zibandakanya:
Uhlalutyo lomxholo wentengiso -Tyala imali ngakumbi kumxholo ochaphazela ingeniso.
Ithemba lokuqonda ngentengiso -Futshane umjikelo wakho wentengiso ngokulandela umkhondo wenqanaba lomthengi.
Uhlalutyo lomsebenzisi kubunkokheli bokuthengisa -Phinda kwakhona indlela oziphatha ngayo kubathengisi bakho abaphezulu ukuze ubonise impumelelo
basemoyeni -Thengisa ngobukrelekrele kwaye uhambise amava akho ngakumbi kunye nenani elingalinganiyo kunye nolwahlulo lweedatha.
Ukuphucula ukusebenza kwentengiso ngokwenza umxholo ulawule ngokudityaniswa kolawulo lweeasethi ze-Showpad, okanye ukwakha iiapps ezinamandla kunye neenkqubo zohlalutyo usebenzisa i-API ye-Showpad eyomeleleyo kunye ne-SDK. Unxibelelaniso, Kubandakanywa:
umxholo -Ngqamanisa ne-Outreach okanye i-Salesloft
Ulawulo oludibene nabathengi -Kubandakanya iSalesforce, iMicrosoft Dynamics, okanye iSAP.
Ukuhlanganiswa kwe-imeyile - Outlook kunye G Suite.
YokuThengisa -Kuquka noMarketo.
iintetho -Hlela iisilayidi zikaGoogle okanye iMicrosoft PowerPoint ngaphakathi kwiPowpad
Ukwabelana ngesikrini -Ukusondeza ngaphandle komthungo kunye nokudityaniswa kweKhalenda kaGoogle.
Social - Yabelana ngokuthe ngqo kwi-Twitter, i-LinkedIn, kunye ne-WhatsApp, okanye ukope ikhonkco kuyo nayiphi na iqonga lezentlalo usebenzisa ulwandiso lwe-Showpad kwiGoogle Chrome.
I-Showpad ikwanazo zonke ii-API eziyimfuneko kunye ne-SDK yokudibanisa ngokupheleleyo iqonga kulo naliphi na iqonga.
Cela iDemo yokubonisa
tags: aiukuzibandakanya komthengigoogle suitegsuituphawuIMicrosoft Dynamicsimbonakalo yeMicrosoftukufikelelauhlalutyo lokuthengisauvavanyo lokuthengisaukuqeqesha ukuthengisaumxholo wentengisoUkunika amandla ukuthengisaulwazi lokuthengisaumlinganiselo wentengisoUmthengisi wentengisoindlela yokuthengisaiintetho zentengisouqeqesho lokuthengisantshizaumboniso